၂၀၁၂ အတွင်း လူသတ်မှုနှင့်မုဒိမ်းမှု အများဆုံးဖြစ် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ – ၂၈
အမှုကြီး ၁၀ မျိုး စုစုပေါင်း ၂၃၁၈ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် လူသတ်မှု ၁၃၂၃၊ မုဒိမ်းမှု ၆၅၄ ရှိပြီး၊ ကျန်အမှုကြီးများထက် ထိုနှစ်မျိုးက လွန်စွာများပြားခဲ့သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံး အမှုကြီး ၁၀ မျိုးဖြစ်ပွားမှုတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၌ ၂၂၉၀ မှုရှိ၍ ၂၀၁၂ က ၂၈ မှုပိုများခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းမှုခင်းဖြစ်ပွားမှုများမှာ နှစ်အလိုက် တိုးလာသည်ကိုလည်း စာရင်းဇယားများအရ သိရှိရသည်။ အမှုကြီး ၁၀ မျိုးတွင် မပါသော ခိုးမှုများမှာလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုများ လာကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်များတွင်ဖော်ပြထားသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးနည်းတူ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အမှုကြီး ၁၀ မျိုးတွင်လည်း လူသတ်မှုနှင့် မုဒိမ်းမှုက ပထမနှင့်ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တွင် တစ်နှစ်တာအတွင်း ရာဇ၀တ်မှုပေါင်း ၃၅၆ မှုဖြစ်ပွား
ခဲ့ရာတွင် လူသတ်မှု ၁၆၄ မှုဖြစ်ပွားကာ ၁၅၄ မှုအား တရားစွဲဆိုနိုင်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
မုဒိမ်းမှုမှာ ၁၃၅ မှုဖြင့် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ ပြစ်မှုကြီးနှစ်ခု ဖြစ်ပွားနှုန်းမှာ တစ်နှစ်တာ ဖြစ်ပွားသော အမှုစုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ကျော်ပင်ရှိသည်။ လုယက်မှု ၃၀၊ ဖောက်ထွင်းမှု ၁၈ မှု၊ တိရစ္ဆာန်ခိုးမှုနှင့် မတရားအသင်းသုံးမှု အသီးသီးဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့ကပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် (၂၀၀၁ မှ ၂၀၁၀)တွင်လည်း ပြစ်မှုကြီးများတွင် လူသတ်မှုနှင့် မုဒိမ်းမှုမှာ အများဆုံးဖြစ် ပွားခဲ့သည်။ ဆယ်နှစ်အတွင်းလူသတ်မှု ၁၁၇၇ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မုဒိမ်းမှု ၇၅၅ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ပြစ်မှု မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ရန်ကုန်တွင် ခိုးမှု ၈၉၈ မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင် ၅၄၇ မှုသာ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၃၅၁ မှုမှာမူ တရားခံမမိခဲ့ဘဲ ယာဉ်တိုက်မှု ၁၈၀၃မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာတွင်လည်း ၁၅၀၉ မှုသာ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း စာရင်းဇယားများအရ သိရှိရသည်။ ယာဉ်တိုက်မှုများတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၆၃၄ မှု ပိုများသကဲ့သို့ ၂၀၁၀ပြည့်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၁၀၀၈ မှု ပိုများလာသည်။
ရန်ကုန်တွင် အထက်ပါအမှုများ မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ခဲ့သော အမှုဆယ်မျိုးဖြစ်သည့် လောင်း ကစား၊ လက်နက်ပုန်း၊ ယစ်မျိုး၊ ပြည့်တန်ဆာ၊ ခြေချုပ်၊ ရဲဘက်၊ ခိုးမှုမသင်္ကာ၊ ၅/ညနှင့် ဆင်ဆာမဲ့ရေဒီယို အမှုပေါင်း ၂၅၄၅၇ မှု ဖြစ်ပွားရာတွင် ၂၅၁၆၀ မှု တရားစွဲဆိုနိုင်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် လူကုန်ကူးမှုမှာ ၁၁၉ မှု အရေးယူနိုင်ခဲ့သောကြောင့် ၂၀၁၁ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၁၇ မှု လျော့နည်းကာ ၂၀၁၀ ထက် ၅၂ မှု လျော့နည်းပြီး ၂၀၀၉ ထက် ၃၆ မှု လျော့နည်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
This entry was posted on January 30, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← More lands confiscated in Maungdaw south
ကုလငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် မြန်မာရဲများ၌အရည်အချင်းပြည့်မီသူမရှိသေး →